Iividiyo ezingakumbi ze-Civil 3D, imephu ye-AutoCAD kunye noHlaziyo-iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Iividiyo ezingaphezulu ze-Civil 3D, i-AutoCAD Imephu kunye neNkundla
... eyona nto ingcono, emva kweAUGI MexCA eya kwondlo ...
Ngethuba elidlulileyo ndenze uhlolo lwe-AUGI kwisahluko sayo sesitrosi, kunye nenani elixabisekileyo labasebenzisi bezobuchwepheshe I-AutoCAD ICAND3D kunye neMephu. Ngelishwa, iphepha liye kulondolozo ngaphezulu konyaka ophelileyo, uhlaziyo esele silulindile kwaye ngokuqinisekileyo luza kufika kwiinyanga ezimbalwa.
Ukugcwalisa loo msantsa ndenza uphononongo olufanayo kwindawo yomxholo efanayo. Le Yiforum ye-CAD, ekhuthazwe yi-CADStudio, ngokungahambi kakuhle kwimeko yethu kuba ukugcwala kwesiNgesi nesiCzech kwenza umxholo ungabi nabubele kubasebenzisi abathetha iSpanish. Ndizamile ukubeka ulungelelwaniso lwezinto ezinxulumene noko nangona ngeenjongo zokufunda kuncinci kunokwaneleyo ukubona iividiyo.
Uninzi umxholo ungabonwa ngaphandle kokungena, kodwa iforum kunye namanye amavidiyo afuna ukubhaliswa, phantsi kokuthatha umzuzu omnye; abo abakwimoya ye-Flash banokujongwa kwi-intanethi, ezinye iifom ze-avi kufuneka zilandwe.
Iividiyo zoBunjineli usebenzisa i-AutoDesk Civil 3D
Izinto ezisemgangathweni zobungakanani bomhlaba
I-Terrain model, izixhobo ezahlukeneyo
Iprogram ye-3D evela kwiindawo
Ukuguqulwa kwamandla kwiprofayili ende
Imigangatho yokuyila kwendlela
Iifowuni ezibonakalayo kwimbono yeprofayili
Izikhokelo zeprofayili yezityalo
Umgijimi ukusuka kulungelelaniso
Sika uze uzalise umthamo wemithambeka
Imiqulu kunye nemithambeka yomhlaba
I-urbanizations, iinkcukacha kunye nokuhlukaniswa kweziqendu
Uyilo lwe-Hydrosanitary, iipayipi
Iibhobho, i-dynamic collision
Iibhobho, enye into ...
I-Topography kwi-backward, kwincwadi yencwadana
Thumela umzekelo welizwe kwiGoogle Earth
I-Plex.Earth isebenza kwi-AutoCAD Civil 3D
Amanqaku okubhaliweyo 2D ku-3D usebenzisa i-TXT2ZC
Ukusebenzisa itemplates ... HTU
I-HEC-RAS, ukuhamba kwamanzi
Ukusebenza nedatha engeniswe kwi-HEC-RAS
II-Dynamite VSP yobunjineli
Ukumiswa kweendlela kwi-2.0
IiVideos kwiMephu ye-AutoCAD
I-AutoCAD Imephu ye-2009, isebenza ngee-WMS
I-AutoCAD Imephu, isebenze nge-WFS idatha
Ukungenisa kunye nezitayela ngeefayile ze-SHP
Ukudala kwe-topology ukusuka kwiindawo kunye nemida
Ukubuyiselwa kwakhona kweefayile zobume kunye ne-FDO
Ukudala nokusebenzisa iifomati zokuprinta usebenzisa i-Topobase
I-Topobase-Umphezulu / uHlelo loMthengi
I-Topobase - idatha yokusebenzisa usebenzisa / umxhasi webhu
I-Topobase - ukuphonononga nokunyathelisa / umxhasi wewebhu
Ukongezelela kukho inani elihle levidiyo usebenzisa AutoCAD, Inventor y Hlaziya.
Yiya kwiForama yeCAD
Bhalisa kwi-Forum yeCAD
Yiya kwiCAD Studio
Ikhasi elihle kakhulu, ndiyabonga kakhulu
Ikhasi elihle kakhulu, ndivuyisana. Gcina uthunyelwe ukuba ndiya kuzifumana kungekudala